Ihe Ngosipụta Ngwaahịa laghachiri na Channel 5 na ATEM Mini Pro | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Mmepụta Ihe » Ihe Ngosipụta Ngwaahịa laghachiri na Channel 5 na ATEM Mini Pro
Ihe Ngosipụta Ngwaahịa laghachiri na Channel 5 na ATEM Mini Pro
Ntucha Blackmagic taa kwupụtara na ATEM Mini Pro enyerela usoro kachasị ọhụrụ nke Gadget Show, nke North One Television wepụtara na Birmingham, ịnọ na ikuku n'agbanyeghị mkpọchi na nsogbu ịma aka nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Amalitere na 2004, Ihe ngosi nke Gadget bụ mmemme teknụzụ ndị ahịa na-elekwasị anya, nke na-ejikọ njikọta studio n'oge nke ọ bụla. Na UK, a na-agbasa ozi ya na Channel 5 ma bụrụ otu n'ime usoro na-agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba eto eto wara wara akụkọ, nyocha na nghọta nye ụfọdụ ọgbara ọhụụ ọhụụ si na nka ụwa.
Onye na-emepụta ihe nkiri, Tim Wagg, na-akọwa, “Mgbe gọọmentị kwere ka nrụpụta TV bido ọzọ na June, ndị otu nwere naanị ụbọchị ise iji kwado maka ihe ndekọ studio. Ọ bụ ihe incredibly uko turnaround karịsịa na-ewere na anyị niile na-arụ ọrụ remotely. ”
Ọ na-agbakwụnye, "Anyị ga-enwekarị ụgbọ ala OB, nke nwere ihe ruru mmadụ iri abụọ setịpụrụ, nke a ga-ebelata nke ukwuu iji debe gburugburu ọrụ nchekwa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya."
"Otu akụkụ dị oké mkpa nke Ihe Ngosiputa Ngwa ahụ bụ ka ndị na-eweta anyị meghachi omume na ngalaba ndị edere (VTs) bụ ndị egosiri ndị na-ekiri ha," Tim gara n'ihu. "Ya mere ịchọta ụzọ weta ihe ndị a n'ime ụlọ ọrụ studio na-eme ka mmemme mmemme dị ọtụtụ karịa."
"Anyị na-ahụkwa na ọ bara uru n'oge ngalaba akụkọ anyị ebe ọdịnaya na-ese n'elu ihuenyo iji weta ihe ngosi na mkparịta ụka ahụ, ihe ga-achọ ọrụ ọtụtụ awa na post iji debe ihe nkiri ahụ na igwe onyonyo efu."
“Enweghị ezigbo okomoko nke ụgbọ ala OB na ndị ọrụ anyị na-arụbu, anyị enweghị ụzọ ị ga-esi jiri ihe nlele a dị ọcha, anyị chọkwara azịza ọzọ nke nwere ike ibugharị, dị mfe iji ma dịkwa ọnụ ala. Anyị chọkwara HDMI Njikọta. ”
Nke a bụ ebe ATEM Mini Pro batara. “Enwere m ihe ọgbụgba niile, eserese na VT, boro m MacBook, yana site na ijikọ nke a site na HDMI na ATEM Mini Pro, anyị enweela ike ịtụfu ọdịnaya na ileba anya na enweghị nsogbu. Anyị enwewokwa ike iji ya nweta ngalaba 'Wallop of the Week', nke a na-akwado mbugharị. ”
"Ọ dị ka ọ dị mfe," ka ọ gara n'ihu. “Mana ewepu ATEM Mini Pro, anyị gaara agba mbọ itinye ụdị ọrụ mmiri a dị. O meela ka anyị nwee ike ịga n'ihu na-emepụta ihe nkiri slọọd nke na-agakọ ngwa ngwa, nke mkparịta ụka anyị na-achọ. ”
Na-agbakwụnye, "Dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ, Mgbochi COVID ewetawo ọtụtụ ihe ịma aka, mana dịka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe anyị kwadebere nke ọma ịnagide ha, ekele na akụkụ nke ndị nrụpụta dị ka Ntucha Blackmagic."
Tim kwubiri, sị: “Nzaghachi anyị nwetara n’izu ahụ anyị gbusịrị mgbasa ozi mbụ bụ na ị hụghị ihe gbanwere,” ka Tim kwubiri. "Nke ahụ bụ ihe akaebe maka ihe okike na ịdị nkọ nke ndị ọrụ anyị niile."
Gbasara BLACKMAGIC Design
Ntucha Blackmagic na-emepụta ihe kachasị mma video editing ngwaahịa, ihe nkiri vidio ese foto, ndị na-emegharị ihe nkiri, ndị na-emegharị vidio, nlekota vidiyo, ndị na-emegharị ihe nkiri, ndị na-emepụta ihe nkiri, ndị na-ekpuchi ihe nkiri, ndị na-emepụta ihe nkiri na ndị na-emepụta ihe nkiri. Ntucha BlackmagicKaadị DeckLink weghaara kaadị gbanwere mgbanwe na ogo na ịba uru na nrụpụta post, ebe Emmy ™ award emeri DaVinci agba mgbazi ngwaahịa na-achị telivishọn na ihe nkiri ụlọ ọrụ kemgbe 1984. Ntucha Blackmagic na-aga n'ihu na-agbasa mmemme gụnyere 6G-SDI na 12G-SDI na ngwaahịa 3D stereoscopic na Ultra HD arụ ọrụ. Ntọala site na ụwa na-ebute ndị na-ede akwụkwọ mmepụta na ndị injinia, Ntucha Blackmagic nwere ọfịs na USA, UK, Japan, Singapore na Australia. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na www.blackmagicdesign.com.
Previous: Lectrosonics Na-ewebata DCHR Miniature Stereo Digital Receiver
Osote: Biputere ụda Editor / Okike